The Ab Presents Nepal » सुनसरीमा घट्यो अनौठो घटना श्रीमानको गो*प्य अंग सानो भएको भन्दै दिईन डिर्भोस !
सुनसरीमा घट्यो अनौठो घटना श्रीमानको गो*प्य अंग सानो भएको भन्दै दिईन डिर्भोस !
काठमाडौं -: एक सुन्दर परिवारका लागि श्रीमान र श्रीमतीको भावना मिल्न आवश्यक हुन्छ । विवाहपछि केही सम्बन्धहरु लामो समय टिक्न सक्दैनन् । यसका पछाडी धेरै कुराहरुले महत्व राख्ने गर्दछन् । सम्बन्ध विच्छेद हुने कारणहरुमा विचारको मेल नहुनु प्रमुख कारण हो भने अर्को समाज पनि हो । समाजमा केही कुरा लगाउने मान्छेहरु हुँदा पनि सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन् । तर सधै यस्तै कारणले गर्दा मात्रै सम्बन्ध नराम्रो हुनछ भन्ने हुँदैन । सन्तानका विषयमा पनि विवादहरु हुन्छन् ।
यहाँ मन मिल्यो तर जुन कुरामा मिलन हुनुपर्ने त्यसमा विमती हुन गयो । नगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म यो मुद्धा पुगेपछि समितिले दुबैलाई पुनः मिलेर बस्न सुझाव दिएको थियो । तर श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको गोप्य अंग सानो भएकोले आफुलाई शारिरीक सुखभोग पुरा गर्न नसकेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेदको लागि दबाब दिएकी थिइन्’ ।
युवतीकै दवाबमा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय भएको न्यायिक समितिका सदस्य रञ्जेश भट्टराईले जानकारी दिए । दुबैको कुरा सुनिसकेपछि समितिले यौन आक्रन्त पालेर बस्नु भन्दा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि बाटो खुल्ला गर्दै आपसी रुपमा छुट्टिने निर्णय गरिदिएको भट्टराईले बताए ।